'कोरोनाले छुन्न भनेर साँढे बनेर नडुलौ' - सिम्रिक खबर
दक्षिण कोरियामा कोभिड–१९ सङ्क्रमतिको संख्या ९३ हजार २६३ पुग्यो ललितपुरमा रहेको कुमारी छें र कुमारी घर पुनर्निमाण हुने फिल्म ‘राज्जा रानी’ ले जित्यो भारतमा अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड एकै परिवारका बेपत्ता भएका पाँच जनामध्ये दुई जनाको शव कर्णालीमा भेटियो गत नोभेम्बर देखि लगाउँदै आएको राजनीतिक विज्ञापनमाथिको बन्देज फुकुवा गर्दै फेसबुक महाशिवरात्रिको प्रचारप्रसारका लागि पशुपति क्षेत्रमा सांस्कृतिक झाँकीसहित शोभायात्रा
‘कोरोनाले छुन्न भनेर साँढे बनेर नडुलौ’
काठमाण्डौ । सरकारले कोरोनाको विषयमा अनावश्यक रुपमा हल्लाहरु फैलिइरहेको भन्दै त्यस तर्फका हल्लाहरुको पछि नलाग्न आग्रह गरेको छ । आज पत्रकार सम्मलेन गर्दै सरकारले यसलाइ सामान्य रुपमा नलिन आग्रह गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै बिराट मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बुद्ध र बच्चा तथा रोगीहरुलाइ मात्र कोरोनाले छुने जवानहरुलाइ नछुने भन्ने हल्ला फैलाएर जवानहरु बजारमा साँढे जस्तै डुलिरहेको बताए ।
कोरोनालाइ उनले हल्का रुपमा नलिन आग्रह गरे । पत्रकार सम्मेलनमा डा. कार्कीले आफै कोरोना मुक्त भएको र अत्यन्तै जटिल अवस्थाबाट गुज्रनु परेको बताए । उनले आफु चाँडैनै स्वास्थ्य सेवा पाएको कारण बाँच्न सफल भएको बताए । केही ब्यक्तिहरुले पर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री नलगाइ विरामी जाँच्छु भन्दै हल्ला फैलाएको भन्दै उनले यस्ता हल्लाले आफैलाई घाटा हुने बताए ।
वितेको २४ घण्टामा काठमाण्डौका तीन जिल्लामा ३२६ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । उक्त संख्या मध्ये काठमाण्डौका २९३, ललितपुरमा २० जना तथा भक्तपुरमा १३ जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी देशभर ९७९ जना नया संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेहरुको संख्या ४७ हजार २३६ पुगेको छ ।
त्यसैगरी गएको २४ घण्टामा १७३६ जना निको भएका छन् । यो सँगै ३० हजार ६ सय ७७ बढी संक्रमितहरु निको भइ घर गएका छन् । गत २४ घण्टामा ९२१८ परिक्षण गरिएको छ । हालसम्म नेपालमा पिसिआर परिक्षण ७ लाख ७७ हजार ५६३ भएको छ । त्यसैगरी देशभर ४ हजार ७३९ जना क्वारेन्टीनमा रहेका छन् । हाल देशभर १६ हजार २५९ संक्रिय संक्रमित रहेका छन् । १७१ जना आइसियुमा उपचार गराइरहेका छन् भने २० जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन् । यसैगरी सोमबार ११ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ । यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृृत्यु हुनेहरुको संख्या ३ सय पुगेको छ ।
दक्षिण कोरियामा कोभिड–१९ सङ्क्रमतिको संख्या ९३ हजार २६३ पुग्यो
ललितपुरमा रहेको कुमारी छें र कुमारी घर पुनर्निमाण हुने
फिल्म ‘राज्जा रानी’ ले जित्यो भारतमा अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड
एकै परिवारका बेपत्ता भएका पाँच जनामध्ये दुई जनाको शव कर्णालीमा भेटियो
प्रचण्डले माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीतर्फ लागेका नेतालाई पनि डाके
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) आगामी जेठ १३ गतेदेखि २४ गतेसम्म हुने
नेकपा एमालेको आज बस्ने भनिएको सचिवालय बैठक स्थगित
नेपालमा थप ६६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि